सेयर लगानीकर्ता आन्दोलनमा, कारोवार ठप्प – Maitri News
सेयर लगानीकर्ता आन्दोलनमा, कारोवार ठप्प
maitrinews June 5, 2018
काठमाडौँ । सरकारले सेयर कारोबारमा अबैधानिक रुपमा कर लगाएसँगै सेयर लगानीकर्ता सम्बन्धी संघसंस्थाले सुरु गरेको आन्दोलन आज पनि जारी छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधीसँग भएको वार्ता विना निष्कर्ष टुङ्गिएपछि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिईएको नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । ‘हामी लगानीकर्ताको समस्या र माग संबोधन गर्ने उद्देश्य अनुरुप सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा वार्तामा गएका थियौं,’ उनले भने, ‘सरकारले सो विषयलाई कुनै सम्बोधन नगरेपछि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हौं ।’ सेयर लगानीकर्ताले माग भन्दा पनि समस्या समाधानको लागि आन्दोलन गरेको भन्दै उक्त समस्या समाधान नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने समेत उनले जानकारी दिए । ‘लगानीकर्ताहरु आफुले गरेको आम्दानीमा सरकारले निर्धारण गरेको कर तिर्न तयार छन्,’ उनले भने, ‘हानी नोक्सानी र घाटामा सेयर बेच्दा कसरी कर तिर्ने ।’ सरकारले अनावश्यक रुपमा करको भार थुपारेको भन्दै लगानीकर्ताले हिजोदेखि आन्दोलन सुरु गरेका छन् । विरोध स्वरुप सोमबार आधा घण्टा सेयर कारोबार ठप्प पारेका लगानीकर्ताले आज दिनभर नै कारोबार ठप्प पार्ने घोषणा गरेको समेत पौडेलले जानकारी दिए । ‘हामीले हिजो बेलुका नै संयुक्त रुपमा निर्णय गर्दै आज दिनभर नै सेयर कारोबार नगर्ने घोषणा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सोही अनुरुप सबै ब्रोकर कम्पनीलाई कारोबार नगर्न अनुरोध गरेका छौं भने उनीहरुले पनि हाम्रो आन्दोलनलाई समर्थन गरेका छन् ।’
शेयर करोवारमा लाग्ने कर सम्वन्धी विवाद समाधान नहुँदा शेयर करोवार नै प्रभावित वन्न थालेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षके बजेट मार्फत शेयर करोवारमा लाग्ने करको ब्यवस्था परिमार्जन गर्दै आम लगीकर्तालाई अप्ठ्यारो पर्नेगरी नीतिगत ब्यवस्थाको प्रश्ताव गरेपश्चात यो समस्या सृजना भएको हो ।
नयाँ ब्यवस्था अनुसार यो साताको पहिलो दिन आइतबार देखि नै बोनस र हकप्रद सेयरको कारोबारमा तोकिएको नयाँ लाभकरको दर अनुसार कर संकलन भने सुरु भैसकेको छ । सिडिएसका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार कर कार्यालयको पत्र अनुसार आइतबारबाटै कर लागु भैसकेको हो । नयाँ करको दर कार्यान्वयन भैसकेकाले पनि निर्णयबाट फर्कन भने त्यहि सहज नरहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई धर जग्गा र पूँजी बजारप्रति अनुदार व्यक्तिको ट्या लाग्दै आएको छ । तर उनले पटक पटक सेयर बजारलाई पूँजी संकलनको अस्त्रका रुपमा स्विकार गर्दै आएका छन् । यद्यपी बजेट मार्फत गरिएको नयाँ व्यवस्थाले भने सेयर बजार प्रति अर्थमन्त्रीको सार्वजनिक धारणामाथी फेरी पनि आशंका जन्माएको छ । समस्या समाधानकालागि शोमबार सररी सरकरी प्रतिनिधीहरुसँग वार्ता गरिएको भएपनि त्यो निश्कर्षमा पुग्न नसकेको शेयर लगानीकर्ताहरुले बताएका छन् ।
सुरुमा राजस्व चव शिशिर कुमार ढुङगानासँग वार्ता गर्ने भनिए पनि अर्थ मन्त्रालयमा सेयर लगानीकर्ता संगठनका प्रतिनिधीहरु अर्थ मन्त्रालय पुगेपछि सहसचिवहरुसँग मात्रै वार्ता भयो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री र राजस्वतर्फका अर्का एक सहसचिव वार्तामा आएका थिए । उनीहरुले ब्यवसायिहरुलाई समस्या राख्न अुरोध गर्दै त्यसलाई सचिवसम्म पु¥याइदिने वताए ।
वार्तामा लगानीकर्ताका तर्फबाट नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेल र सेयर लगानीकर्ता संघका उपाध्यक्ष तारा फुल्लेल सहभागी थिए । यसैगरी, पुँजी बजार लगानीकर्ता संघको तर्फबाट उपाध्यक्ष राधा पोखरेल पनि वार्तामा सहभागी थिइन ।
वार्तामा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरुले सेयर कारोबार गर्न आग्रह गर्दै वर्षमा घाटा समायोजन गर्न पाइने जवाफ दिएका थिए । उता, वार्तामा सहभागी लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरुले भने त्यसो नहुने भन्दै प्रत्येक कारोबारको घाटा समायोजन गर्न पाउनुपर्ने माग गरे ।
छल फलमा नाफामा मात्र कर तिर्छौं, घाटामा तिर्दैनौं भन्ने अडान लगानीकर्ताहरुले राखे । यसमा अर्थका तर्फबाट सहभागी सहसचिवहरुले कुनै निर्णय दिएनन् ।
Previous Previous post: बैंक धेरै हुँदैमा अप्ठ्यारो हुँदैन—तुलसीराम गौतम,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक
Next Next post: सरकारी अस्पतालमा निजी फार्मेसीलाई बन्देज